प्रकाशित: बिहिबार, माघ १५, २०७७, १४:११:०० जयन्त ठाकुर
जनकपुरधाम– दुर्गानन्द झा २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए।
उनलाई त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय कारागारमा राखिएको थियो। सोही क्रममा उनलाई सरकारले मृत्युदण्ड सुनायो। जेलमा भेट्न पुगेका झाले पत्नी र आमासँग भनेका थिए– ‘नरोओ, अब गणतन्त्र अब आउँछ। तिमीहरू गाउँ जाओ।’
दुर्गानन्दले भनेको ४५ वर्षपछि देशमा गणतन्त्र आयो। २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो।
दुर्गानन्दका पत्नी काशीदेवी र आमा मृत्युदण्डको एक दिनअघि जेलमा उनलाई भेट्न पुगेका थिए। त्यो दिन थियो २०२० माघ १४ गते।
झाले आमासँग भनेको अन्तिम संवाद थियो– ‘आमा नरुनुस्, एक दिन यस्तो आउँछ जब तपाईंलाई दुर्गानन्द झाको आमा भनेर सबैले गर्व गरेर हेर्नेछन्।’ श्रीमतीसँग भनेका थिए– ‘यो नै हाम्रो अन्तिम भेट हो।’
दुर्गानन्दलाई फाँसी दिने समय तय भएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई भेट गराउनकै लागि गाउँबाट बोलाएर ल्याएको थियो। जेलमा भेट्न गएका आमा र पत्नी निकै रोएका थिए। दुर्गानन्दको अनुहारमा त्रास थिएन।
दुर्गानन्द र काशीदेवीको बिहे भएको दुई वर्ष मात्रै भएको थियो। दुर्गानन्द काशीदेवीलाई ‘दो हंसो का जोडा बिछड गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे’ बोलको गीत सुनाउने गर्थे।
मृत्युदण्डको ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि काशीदेवीको स्मृतिमा ताजै छ उनको स्वर। भन्छिन्, ‘उहाँले हिजै सुनाएको गीत जस्तो लाग्छ।’
दुर्गानन्द १९९९ वैशाख १४ गते धनुषाको नगराइन नगरपालिका जटही गाउँमा पिता देवनारायण झा र माता सुकुमारीदेवी झाको गर्भबाट जन्मिएका थिए। उनी एक्लो सन्तान थिए।
उनको विवाह २०१७ सालमा १० कक्षामा पढ्दै गर्दा १४ वर्षीया काशीदेवी झासँग भएको थियो। दुर्गानन्दको शिक्षादीक्षा गाउँबाट पाँच किलोमिटर पर भारतीय क्षेत्रको उमगाँवस्थित दिनदयाल हाईस्कुलमा भएको थियो।
उनी अध्ययन गरिरहेकै क्रममा नेपालमा लोकतन्त्रका लागि संघर्ष चलिरहेको थियो। उमगावँको विद्यालयमा पनि आन्दोलनको प्रभाव थियो। त्यहीं उनले आन्दोलनकारीलाई भेट्ने अवसर पाए।
काशीदेवी गर्भवती थिइन्। दुर्गानन्द संघर्षमा लागे। घरमा एक्लै हुँदा आवश्यक हेरचाह हुन सकेन। काशीदेवीको गर्भबाट मृतबच्चा जन्मिएको थियो।
यसै क्रममा २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले उठाएको निरंकुश कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको बिगुल फुकिसकेको थियो।
दुर्गानन्दले निरंकुशता हटाइछोड्ने अठोट गरे। अनि भारतको जयनगरमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका कांग्रेस नेता सरोज कोइरालाको सम्पर्कमा पुगे। राजामाथि बम प्रहार गर्ने योजना बन्यो। उनी जनकपुर फर्किए।
२०१८ माघ १९ गते कडा सुरक्षाबीच जानकी मन्दिर पुगेका राजा महेन्द्रमाथि दुर्गानन्दले बम प्रहार गरेका थिए। बम महेन्द्र चढेको गाडीको सिसामा लाग्यो। दुर्गानन्द भाग्न भाग्न सफल भए।
तत्कालीन सरकारले बमकण्ड गराएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई धरपकड गर्‍यो। पक्राउ परेकालाई चरम यातना दिइयो। यस्तो व्यवहार भारतमा रहेका दुर्गानन्दलाई सह्य भएन।
त्यसपछि उनी जनकपुरधामतर्फ फर्किए। जनकपुरधाम नपुग्दै उनलाई तत्कालीन एसपी मानबहादुर राईको नतृत्वको टोलीले पक्राउ गर्‍यो।
भोलिपल्ट हेलिकप्टरबाट काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारमा लगिएका दुर्गानन्दलाई राजद्रोहको मुद्दा चलाइएको थियो।
सरकारले बमकाण्ड अध्ययन गर्न विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पशुपतिप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा झपटसिंह रावल र गुणनाथ उपाध्याय सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०१९ भदौ १९ मा प्रतिवेदन बुझायो।
प्रतिवेदनमा दुर्गानन्द, अरविन्द ठाकुर, दलसिंह थापालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको थयो।
कानुनमा ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन भन्ने उल्लेख थियो। परिवारका सदस्यले आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट र मीनबहादुर थापाले २०१९ पुस ५ मा उजुरीकर्तालाई झिकाउन आदेश दिए।
सोही वर्ष फागुन २० मा न्यायाधीश दुर्गादत्त उपाध्याय र भैरवप्रसाद उपाध्यायले विशेष अदालतकै निर्णय सदर गरे। २०२० भदौ १ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरी सबैलाई समान सजाय दिने व्यवस्था गरियो।
दुर्गानन्दलाई माफी मागी बिन्तीपत्र लेख भनिएको थियो। तर उनले मृत्युदण्ड स्वीकारे। माघ १५ गते उनलाई फाँसी दिइयो। परिवारले उनको शव पनि पाएनन्। अनि कुशको शव बनाएर भारतको गयामा अन्त्येष्टि गरिएको थियो।
कांग्रेसबाट राजनीतिमा लागेमा दुर्गानन्द झाले गणतन्त्रका लागि प्राणको आहूति दिए। तर धेरै पटक सत्तामा पुगे पनि कांग्रेसले सहिद घोषणा गर्न सकेन।
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७२ फागुन १९ गते उनलाई सहिद घोषणा गरियो। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि फाँसीमा चढेका दुर्गानन्दले सहिदको सम्मान पाउन ५२ वर्ष पर्खनुपर्‍यो।
नेपाली कांग्रेसले माघ १५ गते बर्सेनि बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको छ।
पाठ्यपुस्तकमा भ्रामक जानकारी
पाठ्यपुस्तकमा दुर्गानन्दबारे भ्रमपूर्ण जानकारी फैलाइएको पाइएको छ। पाठ्यक्रम विकास विकास केन्द्रबाट प्रकाशित कक्षा ११ को नेपाली विषयमा नेपालको पहिलो गणतान्त्रिक सहिदबारे गम्भीर त्रुटि देखिएको हो।
किताबमा दुर्गानन्दको जन्मस्थान, आमाको नाम र सहादत मिति गलत उल्लेख छ।
किताबमा उनको जन्म सिरहा जिल्लाको जटही गाउँमा भएको, आमाको नाम देविका झा र सहादत मिति माघ ५ गते उल्लेख छ। तर उनको परिवार अहिले पनि धनुषको जटहीमै छन्।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं जटही निवासी प्रवेश चौधरीले दुर्गानन्दका विषयमा पाठ्यपुस्तकमा त्रुटिपूर्ण सामग्री राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘सहिद दुर्गानन्द झाका विषयमा गलत गलत जानकारी दिएर इतिहास नै तोडमरोड गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।’
बेसहारालाई आश्रय दिने जानकी वृद्धाश्रम आफैँ सहाराको खोजीमा
सरुवा भएको ठाउँमा जानै मान्दैनन् डा. यादव, औषधि खरिद प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल!
दाम्पत्य बचाउन पतिसँगै लड्दै अनिता
बलिउडमा जम्दै नेपाली संगीतकार प्रवेश मल्लिक
ओझेलमा धनुषाको मकर मेला